Akwụkwọ Josie Scotchmer na Martech Zone |
Edemede site na Josie Scotchmer
Josie Scotchmer bụ onye njikwa ahia na Mailjet, Ahịa email na ikpo okwu ozi ịntanetị azụmahịa. Josie bụ onye nwere mmasị na B2B2C Marketing Manager na usoro azụmahịa maka nkwukọrịta ahịa.
Jiri otu ụbọchị na-agagharị na London, New York, Paris ma ọ bụ Barcelona, ​​n'eziokwu, obodo ọ bụla, ị ga-enwe ihe mere ị ga-eji kwenye na ọ bụrụ na ịkeghị ya na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ meghị. Agbanyeghị, ndị ahịa na UK na France na-arụtụ aka maka ọdịnihu dị iche nke mgbasa ozi mmekọrịta kpam kpam. Nnyocha na-ekpughe atụmanya gbara ọchịchịrị maka ọwa mgbasa ozi mmekọrịta dịka naanị 14% nke ndị na-azụ ahịa nwere obi ike na Snapchat ka ga-adị n'ime afọ iri.